မေတ္တာရေစင်မှကြိုဆိုပါသည်။: January 2009
2:38 AM Posted In Food Edit This0Comments »
၁။ ဆန်ကြာဇံ (၁နာရီလောက် ရေစိမ်ထားပါ)
- ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်နီကိုကြော်ပါ။
- ကြက်သွန်နီပျော.လာရင် တောက်တောက်စင်းထားတဲ. ကြက်သားကိုထည်.ကြော်ပါ ဆား၊ပဲငံပြာရည်အနည်းငယ်ထည်.ပါ။
- ကြက်သား ကျက်သွားရင် ပါးပါးလှီးထားသော ဂေါ်ဖီ ရောကြော်ပါ။
- ကြာဇံကိုရောကြော်ပါ။ တအောင်.နေရင် တရုတ်နံနံ ထည်.ပါ။
- ဆား၊ အချိုမုန်. (အသားမူန်.)၊ ပဲငံပြာရည် စိတ်ကြိုက်ထည်.ပါ။
ကြက်သွန်နီလေး ကို ပါးပါးလှီးပြီး သံပရာသီးလေ ညှစ်ပေးလိုက်လေ။
ရှလွတ် ရှလွတ် :P
2:32 AM Posted In Food Edit This0Comments »
၁။ ဆန်ခေါက်ဆွဲ (Kway Teow)
၂။ ပဲငပိ (Chilli bean sauce)
- ကြက်သွန်ဖြူဆီ လုပ်ရန် ဆီပူတွင် ကြက်သွန်ဖြူ လှီးပြီးသား များကို ထည်.ကြော်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ရွေဝါရောင် သန်းလာရင် မီးဖိုမှ ချပြီး ဆီထဲသို. Black Pepper အမူန်. အနည်းငယ်ထည်.ထားပါ။
- ဆီပူလာလျှင် လှီးထာတဲ. ကြက်သွန်နီ ကိုကြော်ပါ။
- ကြက်သွန် နွမ်းသွားလျှင် ခရမ်းချဉ်သီး ထည်.ကြော်ပါ။
- ပဲငပိ စတီဇွန်း ၂ဇွန်းလောက်၊ ဆား၊ အချိုမူန်.ထည်. ပြီး ရေအနည်းငယ်ရော၍ ခဏအဖုံးအုပ်ထားပါ။
- ခရမ်းချဉ်သီး ကြေသွားလျှင် လှီးထားသော ပဲပြား အတုံးလေးများကို ရောလိုက်ပါတယ်။
- ခေါက်ဆွဲ ကို တပွဲစာ ထည်.ပါ၊
- ဆား၊ အချိုမုန်.၊ ပဲငပြာရည်(ကြာညို.)အနည်းငယ် ထည်.ပါ။
- ကြက်သွန်ဖြူဆီ ထည်.ပါ။
- ခေါက်ဆွဲအနှစ် ထည်.ပါ။
- နောက်ဆုံးမှာ ထောင်းထားတဲ. မြေပဲဆံ ဖြူးပြီး နယ် စားလိုက်ရုံပါပဲ။
- မုန်.ညှင်းချဉ် ထည်.စားလိုက်ရင် တော.ဘာပြောကောင်းမလဲ။ :D
3:51 AM Posted In အစမ်းသပ်ခံအသဲနှလုံး Edit This0Comments »
Auto mp3. Now playing on this blog.
နွေနေပူမှာ ဖြတ်ကျော်လာဖူးမှ ဆောင်းနှင်းကလေးများအား ပိုမြတ်နိုးမယ်
ပန်းပွင့်များခင်း ကိုယ့်ရင်ခွင်လမ်းအဝေး မင်းရောက်ရှိခိုက်
အဖြူရောင်ဆိုတာ အမည်းရောင်တွေကြားထဲ ရောနှောထားမှ ကြည်လင်ပိုထင်ရှားမယ်
6:40 PM Posted In ရင်ထဲက ကဗျာများ Edit This0Comments »
'' ချက်လောက ''
7:50 PM Posted In ချက်တာလောက Edit This0Comments »
ယနေ့ အင်တာနက် ခေတ်ကြီးတွင် ချက်ခြင်းသည် အတော့်ကို ရေပန်းစားလေသည်။
ချက်သည်ဟု ဆိုရာတွင် ချက်ပြုတ်ခြင်း cooking နှင့်
မမှားလိုက်ကြပါနှင့်ဦး။ သိုးဆောင်းစကားဖြင့်ဆိုရသော် chat ၊
မြန်မာစကားကို အသံဖလှယ်၍ ချက် ဟုသုံးနှုံးထားသော မွေးစားစကားလုံး
ဖြစ်ပေသည်။ ယေဘုယျ အဓိပ္ပါယ်မှာ စကားစမည်ပြောဆိုခြင်း
ဟုဘာသာပြန်နိုင်ပေမည်။ ပို၍တိတိကျကျ ဆိုရသော် အင်တာနက်လှိုင်းမှ တဆင့်
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအကြား တမဟုတ်ချင်း စာရေးဆက်သွယ်
စကားပြောကြခြင်းပင်။ အီးမေးလ် ကဲ့သို့ အချိန်စောင့်စရာမလိုပဲ ချက်ချင်း
တုန့်ပြန် ရေးသားနိုင်ခြင်းသည် ကား ချက်ြခင်း၏ အားသာချက်ပါပေ။ အချို့က
ရပ်ဝေး ရောက်နေသော ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများနှင့် ချက်ကြသည်။ အချို့က
မည်သူမည်ဝါရယ်မဟုတ် မိတ်ဆွေရှာ သူငယ်ချင်းရှာ ချင်သဖြင့် ချက်ကြသည်။
အချို့က ကြူကြူ လုပ်ချင်သဖြင့်ချက်ကြသည်။ ချက်သူကို ချက်တာ (chatter)
ဟုခေါ်သည်။ ချက်သူများ စုဝေးရာ အရပ်ကို ချက်ရွမ်း (chat room) ဟုခေါ်သည်။
မယုံမရှိနှင့်မိတ်ဆွေ။ ချက်ရွမ်းထဲတွင် သင်သည် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်သည်။
အမေရိကားရောက်နေသူ ဆယ့်ခြောက်နှစ် တစ်ရက်လျော့ ဆတ်ကော့လတ်ကော့ ကောင်မလေး
ဖြစ်နိုင်သည်။ ပျိုတိုင်းကြိုက် နှင်းဆီခိုင်ဆိုလား ရုရှားပညာတော်သင်
သွားနေသူ စစ်ဗိုလ်ကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ စင်္ကာပူ ပိုလီကျောင်းတက်နေသူ
စတိုင်ထွားထွား သူဌေးသားကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ကလို မည်သူများ
မည်သို့ပင် ချက်ကြစေကာမူ ကျွန်ုပ်အဖို့ကား ချက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ
မှတ်သားဖွယ်များကိုသာ ဤသို့ လေ့လာမိခဲ့ပါသတည်း။
မည်သူက စထွင်ခဲ့သည်တော့ မသိပါ။ အချို့အချို့သော ဥာဏ်ကြီးရှင်တို့မှာ
ချက်ရွမ်းတွင် မြန်မာစာကိုလည်း မရိုက်တတ် အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ရေရေလည်လည်
မတတ်သည်လား ပျင်းသည်လား မပြောနိုင်။ အင်္ဂလိပ် စာလုံးဖြင့် မြန်မာ
အသံထွက်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးလေ့ရှိကြရာ မြင်းဂလိရှ် (Myenglish)
သို့မဟုတ် ဘားဂလိရှ် (Burglish) ဟု ခေါ်တွင်လာသော ဘာသာစကား တစ်မျိုး
"hey.. kaung lay, nay kaung lar?"
"kaung ba byar, ma tway tar taung kyar bee pot"
"hote te lay. Ah lote shote nay de."
ကြာလျှင် မလေး အင်ဒို ဘဟာစာ ကဲ့သို့ မြန်မာ ဘဟာစာ စကားဟု ပေါ်လာနိုင်စရာ
အကြောင်းရှိ၏။ မြန်မာဘာသာ အတတ်ဆန်း အဲလေ.. တစ်ခေတ်ဆန်းချိန်တည်း။
ထို့အပြင် ချက်ြခင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော အောက်ပါဝေါဟာရများလည်း
ရေပန်းစားလာစရာ အကြောင်းရှိသည် ဟုတွေးမိပါသည်။
ချက်ကြသည် ဆိုရာဝယ် ကောင်လေး ကောင်မလေးများသာ မဟုတ်၊ လုကြီးလူငယ် ၊
မကြီးမငယ်များပါ မကျန် အင်တာနက်ရှိက ကွန်ပြူတာရှိက ချက်နိုင်လေသည်။
ကိုယ်ပိုင်နာမည် အစစ်နဲ့ ချက်စရာမှမလိုပဲ။ ဘယ်သူသိတာ လိုက်လို့နော။
ဤသို့ဆိုလျှင် လူရှေ့သူရှေ့တွင် ဟန်ကလေးနှင့်နေကာ ကွယ်ရာကျမှ
သူများမသိအောင် တိတ်တိတ်ပုန်း ချက်သော သူများကို - ချက်ပုန်း- သို့မဟုတ်
- ချက်ပုန်းခုတ်သူ - ချက်ပုန်းသီး- ဟုခေါ်လျှင် သင့်ပေမည်။ ….. အဟိ…
တို့ရုံးက အန်ကယ်ကြီးက လက်စသတ်တော့ ချက်ပုန်းကြီးပဲ။ ဟိုနေ့က ကွန်ပြူတာ
လော့ဂ်အောက်လုပ်မသွားလို့ သွားပိတ်ပေးတော့မှ သူ ကြူနေတဲ့ ကောင်မလေးဆီက
မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ၀င်လာတယ်ဆရာ… စသည်ဖြင့် စာရေးမကလေးများက သူတို့ဆရာကို
စကားတင်းဆိုရာတွင် ဤဝေါဟာရကို တော်သလို သုံးနိုင်သည်။
တညလုံး အပီအပြင် ချက်ထား၍ နောက်တနေ့တွင် ကျောင်း၌ ရုံး၌ အိပ်ငိုက်ကာ
ဒေါင်းနေခြင်းမျိုးကို - ချက်နာကျခြင်း - ဟုခေါ်နိုင်မည်။ ဤသို့
ချက်နာကျလျှင် နံနက်စောစော အင်တာနက် ၀င်ကာ မိမိ အလွမ်းသင့်သူနှင့်
တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက် ချက်လိုက်မှ အနည်းငယ် လန်းလန်းဆန်းဆန်း
ရှိသွားနိုင်လျှင် - ချက်မီအပ်- လုပ်ခြင်းဟုခေါ်နိုင်မည်လား မသိပါ။
မိမိ အမြဲ အစဉ်တစိုက် ချက်လေ့ရှိသော ချက်ဖော်ချက်ဖက်ကို - အချက်တော်-
ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ချက်ရာတွင် ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း သူများမကောင်းကြောင်း
ကိုယ်ကောင်းကြောင်း ပြောကြခြင်းကို - ချက်တင်းနှော - ကြသည်ဟု ဆိုလျှင်
ဟုတ်သလိုလိုရှိသည်။ သို့သော် ဤဝေါဟာရများ ကို နားလေးသော အမေရှေ့တွင် - ညက
အချက်တော်နဲ့ တညလုံး ချက်တင်းနှောထားတာ ဒီမနက်တော့ ချက်နာကျနေပြီ -
ဟုပြောမိလျှင် နားကြားလွဲပါက ပေါင်တွင်းကြော ကောင်းကောင်း
တန်ဆေးလွန်ဘေးဟု ဆိုသည်မဟုတ်ပါလော။ ချက်စ ရှိလျှင် ဆက်ချက်ချင်သည်။
အချက်ကြီးသူတို့သည် စာဖတ်ချိန် အလုပ်လုပ်ချိန် များမှ အချိန်ကိုပင်
ဖဲ့ယူ၍ ချက်တတ်ကြသည်။ အွန်လိုင်းဝင်တိုင်း ချက်ရွမ်းသွားကာ ချက်သူကို
ရှာဖွေတတ်ကြသည်။ ဤအခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေလျှင် -ချက်စွဲခြင်း -
ဟုခေါ်နိုင်သည်။ အချိန်တန်လို့မှ မချက်ရလျှင် မနေနိုင် - ချက်ပိုးထိုး -
လာတတ်သည်။ အချက်ရောဂါ အချက်နာကား ကုစရာနတ္ထိ ဆေးမရှိပြီလော။
ထို့အပြင် မြန်မာ့ အနုပညာ နယ်ပယ်၌လည်း - ချက်လူမိုက်၊ ချက်ပင် ချက်မိုး
ချက်လိုက်ပါတဲ့မေ၊ ချက်တာလောကများ၏ ဟိုမှာဘက်၊ ချက်လောက၏ စိန်ခေါ်သံ၊
မရှိမဖြစ်ချက်၊ ချက်တဗလ၊ ချက်နည်းကြူနည်း- စသည့် ခေါင်းစဉ်များ ဖြင့်
ဤသို့လျှင် ရောက်တတ်ရာရာ တွေးတောမိပါသတည်း။ ။
12:04 AM Posted In ပုံပြင် Edit This 1 Comment »
ဒီနေ့ပုံပြင်လေးကတော့ မာယာရေကန်နဲ့ လျှို့ဝှက်မျက်လုံး....
တောနက်ကြီးတစ်နေရာမှာပေါ့ ..... အပြာရောင် ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီရေကန်ကြီးမှာအပန်းဖြေလာနားတဲ့ငှက်ငယ်လေးတွေ၊ အပျော်ရေလာကစားကြတဲ့ ငှက်ငယ်လေးတွေရှိတယ်လေ။ သူတို့ဟာရေကန်ကိုနေ့တိုင်းလာအနားယူပျော်ပါးရင်း အချင်းချင်းရင်းနှီးလာကြတာပေါ့။ ရေကန်ကြီးမှာဖြူစင်ရိုးသား ပြီးအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ငှက်ငယ်လေးတွေနဲ့ စည်ကားနေသလို ရေကန်ရဲ့တစ်ဘက်မှာလည်းသူတို့ကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်ဆိုတာ
သတိမထားမိကြဘူးလေ။ ဘေးအန္တရယ်ကိုလည်း မမြင်ကြရှာဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ရေကစားနေချိန်မှာ ချောင်းနေတဲ့မျက်လုံးစိမ်းကြီးဟာတစ်ဖြေးဖြေးနဲ့သူတို့အနားကိုကပ်ကပ်လာပါ
တော့တယ်။ သဘာဝရဲ့ အလှတရားမှာ သာယာနေပြီး လေပြေလေးရဲ့ သံချိုမြမြနဲ့သီကျူးလာတဲ့ သီချင်းသံသာလေးတွေမှာ ကြည်နူး နစ်မွန်းနေချိန်မှာ မထင်မှတ်ပဲ ရေကန်ကိုကြီးစိုးထားတဲ့မျက်လုံးစိမ်းပိုင်ရှင်တွေဟာ ချုံပုတ်တစ်နေရာမှအရှိန်နဲ့ ရရာငှက်ငယ် လေးတွေကိုကိုက်ချီပြီးရေထဲမှာပျောက်သွားပါတယ်။ တစ်ခြားငှက်လေးတွေကတော့အလန့်တကြားဖြစ်ကာနီးရာသစ်ပင်အကိုင်းအခက်တွေပေါ်
ပျံတက်သွားကြပြီး အတန်ကြာမှ ရေကန်နားပြန်လာပြီးသူတို့သူငယ်ချင်းလေးကိုလိုက်ရှာကြတယ်လေ။
သူတို့ တွေ့ရတဲ့အရာကတော့ငှက်ငယ်လေးရဲ့ နုနုအိအိငှက်မွှေးလေးတွေပဲပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲရာသီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ နောက်ရာသီသစ်မှာ တစ်ခြားနေရာကငှက်ငယ်လေးတွေ ဒီရေကန်မှာလာပြီးအပန်းဖြေ ပျော်ပါးကြပါတယ်။ အပြစ်မဲ့သူငှက်ငယ်လေးတွေလည်းရေကန်ကြီးရဲ့အလှမာယာမှာငြိတွယ်ရင်း အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲရာသီတိုင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးရလေတယ် .....
မောင်နှမလေးတို့ရေငှက်ငယ်လေးတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေရတာ မာယာရေကန်ကြီးကြောင့်ပဲလား လျှို့ဝှက်မျက်လုံးကြောင့်ပဲလား ??????
ငယ်ငယ်တုန်းကမြန်မာ့အသံမှ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မွန်းတည့်၁၂နာရီမှာလာတဲ့ပုံပြင်လေးတွေပါ။ အတော်လေးကိုပြန်စဉ်းစားယူရတယ်။ :D
1:54 AM Posted In ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက် Edit This 1 Comment »
Happy New Year မှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေ လှိုင်လှိုင် ပြောနေချိန်မှာ တွေ့မြင်ခံစားရတာလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ အီမေးနဲ့ဖုန်းတွေလက်ခံရရှိလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ မေတ္တာနဲ့ပို့ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဟမ်းဟမ်း ... သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေကခေါင်းထဲဝင်ဝင်လာတော့ .... ဟုတ်သားပဲ၊ မကြာခင်ကပဲ မြန်မာ Happy New Year နဲ့ ခုလာမဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ၂၀၀၉ ခု နှစ်သစ် အတွက် greeting လုပ်ကြတာနှစ်ခါတောင်ရှိကြပြီနော်။ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကလည်းခဏလေးပဲ။ နေပါအုံး ဒီကမ္ဘာကြီးကိုမှီခိုနေကြတာ မြန်မာလူမျိုးနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေအပြင်တစ်ခြားလူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်နော်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ် ဘာလို့သူများတွေကိုမေ့နေရတာလဲ။ ငါများ discrimination လုပ်တဲ့လူဖြစ်နေပြီလား။ မြန်မာ New Year နဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ New Year မှာပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ New Year ကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ greeting မလုပ်ဖြစ်တာလည်းလို့သတိရပြီးကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကဝင်လာတယ်။
ခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့မှာတောင် Merry Christmas လို့ greeting ကြသေးတယ်။ ဒါဆိုရင်တစ်ခြားလူမျိုးဘာသာတွေရဲ့ celebration တွေမှာကော ကိုယ်ဘာလို့ greeting မလုပ်တာလည်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးမိတယ်။ အင်း ဒီကမ္ဘာမှာမပြည့်စုံတဲ့လူသားတွေမှီခိုနေထိုင်ကြတာမို့ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း fair and equal ဆိုတာကောက်ရိုးပုံထဲ အပ်ရှာရသလိုခက်ခဲလှပါတယ်။
အဲဒီတော့သတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ လူသားချင်းအတူတူ အဖြူအမဲမခွဲခြားပဲ သူ့စိတ်ကိုယ့်စိတ်စာနာထောက်ထားပြီး အားလုံးကိုပျော်ရွှင်နိုင်ကြစေရန် fair and equal ဖြစ်အောင်
လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းမှာကျရောက်လာတဲ့ နှစ်သစ်များမှနောက်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင် ကျန်းမာရွှင်လန်း၊ ရတက်အေး၍၊ လိုအင်ဆန္ဒများနှင့်ပြည့်ဝကြပြီး ရင်ထဲမှအချစ်စစ်၊ မေတ္တာစစ်များနှင့်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
နောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှလူမျိုး ဘာသာအားလုံး ... WISH YOU A VERY HAPPY NEW YEAR.